Iikhowudi zobume be-http ezineenkcazo
Eyona Ukuvavanya Umlilo Iikhowudi zeMeko yeHTTP eneenkcazo
Iikhowudi zeMeko yeHTTP eneenkcazo
Iikhowudi zeMeko yeHTTP okanye iikhowudi zeempendulo zihlelwe ngokwamaqela amahlanu. 1 × 1 Ulwazi, 2 × Success Impumelelo, 3 × Red Uhlengahlengiso, 4 × Er Impazamo yeKlayenti, 5 × Server Impazamo yeSeva.
Esi sithuba siqulathe uluhlu olupheleleyo lweekhowudi zenqanaba le-HTTP ngenkcazo emfutshane yeekhowudi zokuphendula ziqhelekileyo.
Xa sisenza uvavanyo lwe-API, ihlala iyinto yokuqala esiyijonga kwimpendulo evela kwifowuni ye-API yikhowudi yenqanaba. Kubalulekile ukuba siqhelene neyona khowudi yeemeko zixhaphakileyo ukuze sikwazi ukubona imiba ngokukhawuleza.
1 × × Ulwazi
Iklasi ye-1xx (yolwazi) yekhowudi yesimo ibonisa impendulo yethutyana yokunxibelelana nenqanaba loqhakamshelwano okanye ukucela inkqubela phambili ngaphambi kokugqiba isenzo esenziweyo kunye nokuthumela impendulo yokugqibela.
101 Ukutshintsha iiProtocol
2 × Success Impumelelo
Iklasi ye-2xx (ephumeleleyo) yekhowudi yenqanaba ibonisa ukuba isicelo somthengi samkelwe ngempumelelo, saqondwa, kwaye samkelwa.
Ikhowudi yenqanaba lama-200 (Kulungile) ibonisa ukuba isicelo siphumelele. Umrhumo othunyelwe ngempendulo engama-200 uxhomekeke kwindlela yokucela.
Ikhowudi yenqanaba le-201 (Yenziwe) ibonisa ukuba isicelo sizalisekisiwe kwaye sikhokelele kwinto enye okanye nangaphezulu kwezixhobo ezitsha.
204 Akukho Mxholo
Ikhowudi yenqanaba lama-204 (Akukho Mxholo) ibonisa ukuba iserver isiphumezile ngempumelelo isicelo kwaye akukho siqulatho songezelelweyo sokuthumela kumzimba wokuhlawulwa kwempendulo.
208-Sele Sele Kuxeliwe
Funda iziseko ze-HTTP
Ukulungiswa kwakhona kwe-3 × ×
Udidi lwe-3xx (Ulungelelwaniso kwakhona) lwekhowudi yenqanaba ibonisa ukuba amanye amanyathelo kufuneka athathwe ngummeli womsebenzisi ukuze kuzalisekiswe isicelo.
I-301 ihanjiswe ngokusisigxina
Ikhowudi yenqanaba lama-301 (eliHanjisiweyo ngokusisigxina) libonisa ukuba oovimba ekujoliswe kubo babelwe i-URI entsha esisigxina kwaye nakuphi na ukubhekiswa kwesi sixhobo kufuneka kusetyenziswe enye ye-URIs evalelweyo.
Ikhowudi yenqanaba lama-302 (efunyenweyo) ibonisa ukuba oovimba ekujoliswe kubo bahlala okwethutyana phantsi kwe-URI eyahlukileyo.
300 - Ukukhetha okuninzi
303 - Jonga Okunye
Impazamo ye4 × × yoMthengi
Udidi lwe-4xx (Impazamo yabaThengi) lwekhowudi yenqanaba ibonisa ukuba umxhasi ubonakala enze impazamo.
Isicelo esibi esingu-400
Ikhowudi yenqanaba lama-400 (Isicelo esibi) ikhowudi ibonisa ukuba iserver ayinakho okanye ayizukuqhubekeka isicelo ngenxa yento ebonwa njengempazamo yomthengi (umzekelo, isichazi sesicelo esingalunganga).
Ikhowudi yenqanaba lama-401 (engagunyaziswanga) ibonisa ukuba isicelo asifakwanga ngenxa yokuba singenazo iziqinisekiso eziqinisekileyo zokufumana izixhobo ekujoliswe kuzo.
Ikhowudi yenqanaba lama-403 (elingavumelekanga) libonisa ukuba iserver iyasiqonda isicelo kodwa iyala ukusigunyazisa.
Ikhowudi yenqanaba lama-404 (Ayifumanekanga) ibonisa ukuba imvelaphi iseva ayifumananga kubonakaliswa okwangoku kwesixhobo ekujoliswe kuso okanye ayizimisele kuchaza ukuba ikhona.
Indlela ye-405 ayivunyelwe
Ikhowudi yenqanaba lama-405 (Indlela engavumelekanga) ibonisa ukuba indlela efunyenwe kumgca wesicelo iyaziwa yiseva yemvelaphi kodwa ayixhaswanga sisixhobo ekujoliswe kuso.
Uhlobo lweMedia olungasekelwa
Ikhowudi yenqanaba lama-415 (Uhlobo lweMedia olungasekelwanga) lubonisa ukuba imvelaphi iseva iyala ukuhambisa isicelo ngenxa yokuba umthwalo ohlawulwayo ukwifomathi engaxhaswanga yile ndlela kwizixhobo ekujoliswe kuzo. Ingxaki yefomathi inokuba ngenxa yesicelo esichaziweyo soDidi-Uhlobo okanye uMxholo-weKhowudi, okanye njengesiphumo sokuhlola idatha ngokuthe ngqo.
Intlawulo efunekayo engama-402
Ukuqinisekiswa kommeleli we-407 kuyafuneka
408 Cela ixesha lokuphuma
411 Ubude obuyimfuneko
412 Ukuthintelwa kusilele
Ukuhlawulwa kwe-413 kukhulu kakhulu
Isicelo se-414-URI Kude kakhulu
416 Uluhlu oluCeliweyo alwanelisekanga
417 Ulindelo Aluphumelelanga
421 Isicelo esingalunganga
422 IZiko elingenakuqhubekeka
Ukuxhomekeka ku-424 kusilele
428 Ukulungiswa kwangaphambili kuyafuneka
429 Izicelo ezininzi kakhulu
Cela umhlaba we-Header ukuba mkhulu kakhulu
Unxibelelwano lwama-444 luValiwe ngaphandle kwempendulo
I-451 ayifumaneki ngezizathu zomthetho
Isicelo seKlayenti esivaliweyo se-499
5 × Er Impazamo yeSeva
Udidi lwe-5xx (Impazamo yeServer) yekhowudi yesimo ibonisa ukuba iserver iyazi ukuba iphazamile okanye ayinakho ukwenza le ndlela iceliweyo.
Impazamo yeServer yangaphakathi engama-500
Ikhowudi yesimo sama-500 (Impazamo yangaphakathi yeServer) sibonisa ukuba iserver ifumene imeko engalindelekanga ethintele ekufezekiseni isicelo.
502 Indlela yeGeyithi eNgalunganga
I-502 (Bad Gateway) ikhowudi yenqanaba ibonisa ukuba iserver ngelixa isebenza njengesango okanye ummeleli, ifumene impendulo engavumelekanga kwiserver engenayo efikelele kuyo ngelixa izama ukufezekisa isicelo.
Inkonzo engama-503 ayifumaneki
I-503 (ayifumaneki inkonzo) ikhowudi yesimo ibonisa ukuba iserver okwangoku ayinakho ukujongana nesicelo ngenxa yokugcwala okwethutyana okanye ulungiso olucwangcisiweyo, olunokuthi lunciphiswe emva kokulibaziseka.
504 IXESHA lokuphuma
Ikhowudi yenqanaba lama-504 (Gateway Timeout) ibonisa ukuba iserver ngelixa yayisebenza njengesango okanye ummeleli, ayifumananga mpendulo ngexesha kwiseva enyukayo eyayifuna ukufikelela kuyo ukuze igcwalise isicelo.
Inguqulelo engama-505 ye-HTTP ayixhaswanga
I-506 eyahlukileyo ikwaxoxa
507 Ugcino olungonelanga
Kufunyenwe I-508 Loop
Ukuqinisekiswa kweNethiwekhi eyi-511 kuyafuneka
Iphutha le-599 yeNethiwekhi yokuPhuma kwexesha
Umsebenzi woBunjineli kwi-Intanethi
Isamsung galaxy s6 Android nougat
I-lg g4 vs g5 vs g6
Esona sikhuseli silungileyo s21
Eyona RPG i-offline ye-iPhone kunye ne-Android yokudlala ngo-2020
I-HTC One (M8) kunye neLollipop vs One (M8) kunye neKitKat: uthelekiso lwe-UI
Ezona tshaja zibalaseleyo zeemoto onokuzifumana ngo-2021 (Ukuhlaziywa)
I-Apple iPhone 6s ukufudumeza abanye abasebenzisi: ukukhanya kwekhamera akuyi kusebenza kude kube kupholile
Eyona misebenzi mihle kule veki: $ 200 isuswe kwi-Z Fold 2, i-iPhone 12 Pro Max kunye ne-S21 Ultra BOGO
I-Costco yokuthengisa i-Apple iPad 9.7-intshi (2018) imodeli nge- $ 250 ngexesha lokuthengisa kwayo ngoLwesihlanu oMnyama
Imicimbi yeFitbit emnyama yangoLwesihlanu iya ngqo kwithagethi, yonga enkulu kwizinto ezahlukeneyo ezinxitywayo
Ukuthelekisa i-Apple iPhone 7 vs HTC 10
Ngaba ibhetri yakho ye-iPhone 5 ngesiquphe ayibambanga mali ngendlela ebikade isenza ngayo? I-Apple inokuyibuyisela simahla
I-Apple Watch Series 4 vs Series 3 kunye no-Series 2: zeziphi ii-apos ezahlukeneyo, kunjalo?